Malagasy Archives - Page 20 of 27 - Book News Madagascar
Ireo mpanao baolina kitra nahazo vola indrindra nandritra ity taona 2018 ity
Namoaka ny lisitr’ireo mpanao baolina kitra nahazo vola indrindra maneran-tany ny tranonkala organismes.org. Mahazo ny laharana voalohany amin’izany i Lionel Messi. (more…)
Ireo klioba baolina kitra 20 manan-karena indrindra maneran-tany
Namoaka ny lisitr’ireo klioba baolina kitra 20 mahazo vola indrindra maneran-tany ny tranonkala organismes.org. Mahazo ny laharana voalohany amin’izany ny klioba Manchester United any Angletera: (more…)
Angovo eto Madagasikara : tokony hahazo 67 tapitrisa dolara isan-taona ny Fanjakana
Fihenana. Ilaina ny fahaiza-mitantana eo amin’ny sehatry ny angovo mba hampihena ny fatiantoka eo amin’ny famokarana sy ny varotra eto Madagasikara. Raha vita izany, hoy izy dia ahazo 67 Tapitrisa dolara isan-taona ny Fanjakana. 50% mantsy amin’izao ny fatiantoka eo amin’ny famokarana, ary 30% eo amin’ny varotra hihena. Afaka hahena Read more…
Mihitatra any amin’ny lafin’ny fanabeazana ny savorovoro politika misy eto Madagasikara. Toeram-pampianarana maro miankina amin’ny fanjakana no nikatona vokatr’izany eto an-drenivohitra. (more…)
Salariés des zones franches – Contraints de travailler dans des conditions déplorables malgré le Covid-19